Izibonelelo ze-IDRA-21 zefowuni ze-Smart | Yenza i-Nootropics powder
I-IDRA-21 ipowder benefits
/Blog/IDRA-21/I-IDRA-21 ipowder benefits
ezaposwa ngomhla 04 / 26 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo IDRA-21.
Yonke into nge-IDRA-21 powder
1.Smart i-IDRA-21 powder છ Yintoni i-IDRA-21
3. I-IDRA-21 powder isebenza njani?
I-5.IDRA-21 ipowder benefits
I-6.IDRA-21 ipowder life life half
I-7.IDRA-21 i powder
I-8.IDRA-21 nemiphumo emibi
I.Raw IDRA-21 powder esisiseko Abalinganiswa:
I-molecular Formula: C8H9ClN2O2S
1. I-IDRA-21 powder i-Smart drug છ Yintoni i-IDRA-21 powder
Abaninzi ngoko kuthiwa iziyobisi eziqhelekileyo zisebenza ngokuqhelekileyo, i-popular ID eyodwa ye-Smart IDRA-21 powder (CAS 22503-72-6) I-nootropic idibanisa iikhemikhali zophando ezibizwa ngokuba yi-ampakine.IDRA-21 ipowusi eluhlaza isebenza njengezidakamizwa ezikhuthazayo kwaye ngoku iphandwa malunga nemiphumo ekuphuculeni imemori, ukuphuculwa kwengqondo, ukuvuselela nokuguqula ukulahlekelwa kwengqondo. Kusenokwenzeka ukuba yenziwe kwi-1994 okanye i-1995 njengoluvavanyo lokuqala lweeklinikhi kunye namacandelo okuphanda aphandwe ngabanye (i-IDRA-21 powder ihlola) ibonakala kwincwadi kwi-1995.
Inkcazo ye-Smart IDRA-21 inkcazo
igama IDRA-21 powder
Inombolo yeCAS 22503-72-6
Iintetho ezifanayo IDRA 21;7-CHLORO-3-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-1,2,4-BENZOTHIADIAZINE;7-CHLORO-3-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-1,2,4-BENZOTHIADIAZINE 1,1-DIOXIDE;7-CHLORO-3-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-1,2,4-BENZOTHIADIAZINE S,S-DIOXIDE;IDRA 21,98%;2H-1,2,4-Benzothiadiazine,7-chloro-3,4-dihydro-3-Methyl-, 1,1-dioxide;AMPAKINE;7-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide
inkcazelo I-IDRA-21 powder eluhlaza ibhenothiza. Isakhiwo esingahambelani no-Aniracetam, esinye isiyobisi se-ampakine. Ingqungquthela ye-chiral, kunye ne-dextrorotary isomerom ibe yifom esebenzayo
I-Molecular Formula C8H9ClN2O2S
Isisindo somzimba 232.69
Ngokuqinisekileyo i-nootropics iya kuba nefuthe kuphela ezindleleni ezithile ze-neural eziya kubangela ukuba ingqondo iqhume okanye ihlawule.
Iindlela ze-Neural ziyinkimbinkimbi kwaye ngamanye amaxesha azikwazi ukwenza ngokuchanekileyo njengoko zifanelekile, ngoko ngezinye iinkhathi ingqondo kunye nokuphendula komzimba akunakwenzeka ngokuchanekileyo okanye kulindeleke. Njengawo nawaphi na uhlobo lamachiza okanye ukuxhaswa, i-nootropic ingaba nemiphumo eyahlukileyo kunye nefuthe eyahlukileyo kwimiphumo kubantu abahlukeneyo.
Ezi zifundo ezizodwa zeemveliso zizahluka kwii-herbal teas ukuze zivelise i powders. Ukusetyenziswa kwamaNootropics kunokukunceda ukuphucula ingqondo; khuthaza impilo yengqondo ebudeni bexesha elide kwaye kwezinye iimeko, kuye kwaziwa ukuba ezinye zeNootropi zezona zinto zilungele kwaye zinamandla kunokunceda ukulungisa izicubu ze-neural eziwonakalisiweyo.
I-Nootropics, efana nePsilocybin (iMushrooms Mushrooms) ingaba nefuthe elihle kumsebenzi wokuqonda, ngelixa ezinye i-nootropic ezifana neCaffeine ivuselela ingqondo ekujoliswe kuyo ukuba ichazwe ngokuthi 'i-Psychostimulant'. Kodwa akuzona zonke i-nootropiki ezinokuthi zibe nefuthe elide kunye nefuthe elinjalo.
2. Yintoni i-nootropics?
Nootropics badla ngokubizwa ngokuthi 'izidakamizwa ezihlakaniphile', kuba banako ukuphucula umsebenzi wokuqonda. Bangakwazi ukukhulisa ingqalelo, amandla okufunda, imemori, imizwa, ukukhuthazwa kunye namandla.
Igama elithi 'nootropic' lisetyenziswe okokuqala kwi-1972 yi-pharmacologist, owathatha igama kwi2 amagama esiGrike athi 'noos'meaning' kwengqondo 'kwaye' ithetha '. Ukuguqulelwa kwangempela kwegama kukuthi 'ukujika engqondweni.'
Amachiza aneenzuzo ezahlukeneyo kwaye asetyenziswa ngokubanzi ngabantu abasebenza kwimisebenzi emfuno kunye neemfuno zokugcina umgca wokukhuphisana, kunye nabafundi abafundela iimviwo.
Ubomi bwanamhlanje buhlala busobala, ngoko abantu bajika kwiiodotropics ukuba bathabathe oko babecinga ngaphambili.
IDRA 21 powder uyisimo se-allosteric esihle se-glutamate AMPA receptors. Iyakwandisa amandla okwenza i-synaptic ngamandla ngokunyusa ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwama-receptors ye-AMPA kwaye ngoko ke kunokuncedisa iziphumo zokuphucula imemori kwizigulane ezinokukhubazeka kwengqondo, kuquka i-AD.
4. Uphando lwe-IDRA-21 powder
Ininzi yolonwabo olujikelezayo lwe-IDRA-21 powder livela kwizifundo zezilwanyana zakutshanje ezenza iziphumo ezintle kwimimandla yomsebenzi we-nootropic, i-potency, kunye nexesha elide.
-Qhathanisa noHuperzine A
I-Huperzine A yi-acetylcholinesterase (AChE) ye-inhibitor ephendulelayo, ukulawula kwayo kubangele ukwanda kwamanqanaba athile kumazinga ase-acetylcholine ebuchosheni. Kwizilingo zeklinikhi zabantu, iHuperzine A yabangela ukuphuculwa kwengqondo kwizigulane ezinesifo esifana ne-modem ye-Alzheimer's disease (AD) esibonakalisa amandla ayo njenge-agentative agent in therapy ye-AD.
I-IDRA i-21 powder iyisimo se-allosteric esihle se-glutamate AMP receptors. Iyakwandisa amandla okwenza i-synaptic ngamandla ngokunyusa ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwama-receptors ye-AMPA kwaye ngoko ke kunokuncedisa iziphumo zokuphucula imemori kwizigulane ezinokukhubazeka kwengqondo, kuquka i-AD. Uphononongo lwangoku luhlolisise imiphumo yezilwanyana ezimbini kwiimpawu eziqhelekileyo, ezihambelanayo, ezincinci ezincinci ukuze zichonge ukuba ingaba zibangele ukuphuculwa kwengqondo kwinkqubo enokuthi isebenze ngokufanelekileyo.
I-pigtail macaques (i-Macaca nemestrina e-6) yaqeqeshwa ngokukhawuleza ekusebenziseni imemori yokubona, imilinganiselo yememori ebonakalayo ebonakalayo, ukuya kwi-90% impendulo ezichanekileyo kwixesha elilodwa lokulibaziseka (i-10, i-30, i-60, kunye ne-90s) 1). Baye bavavanywa kwiinguqulelo ezimbini zomsebenzi: Umsebenzi we-90 wawuquka ukulibaziseka okunye okudibeneyo phakathi kwiseseshoni kwaye iinkawu zenza ngokuchaneka kwe-2%. Umsebenzi we-24 ubandakanywe, kwiilingo ze-64 nganye, uludwe lwezinto ezintandathu ezenziwe ngokulandelelana. Izinto ezimbini ezivela kuloluhlu zaze zinikezelwa ngokukhethekileyo zidibene kunye nezinto ezinobunobumba kwaye zilandela ezimbini zokulibaziseka ezine ezidibeneyo kwiseshoni. Lo msebenzi onesidingo esiphezulu se-mnemonic wenza ukusebenza okuphakathi kwe-XNUMX% echanekileyo.
Ukulawulwa komlomo we-huperzine A akuzange kuphazamise ngokuphawulekayo ukusebenza kweenkawu kumsebenzi othile. Nangona kunjalo, ulungelelaniso olubi olufunyenweyo lufunyenwe phakathi kwenkqubo yokuqala kokulibaziseka kunye nokutshintsha kwintsebenzo phantsi kwe-huperzine A, ebonisa ukuba phantsi kweemeko apho izifundo zenza kakubi (i-55-69%), eso siphumo siphumelele ekusebenzeni ngcono, ngelixa akukho phuculo lufunyenwe xa isiseko sisondele kwi-90%. Enyanisweni, xa izifundo ziqhuba kakuhle, i-huperzine A yayilindele ukunciphisa ukuchaneka kokusebenza, ebonisa ukuba kwinkqubo esebenza kakuhle, ukunyuka kwe-acetylcholine akuphuculanga ukusebenza okanye imemori, ngakumbi xa izilwanyana ziphantse kummandla ophezulu ukusebenza. Ngokwahlukileyo, ukulawulwa komlomo kwe-IDRA 21 powder kuphucule kakhulu ukusebenza kuMsebenzi we2, ngakumbi ngokulibaziseka kakhulu. Oku kufunyanwe kukuxhasa ukusetyenziswa kweli gciwane kunyango lweengxaki zengqondo kunye nokukhunjulwa kwememori.
Kwisifundo esenziwe ngama-patas, iinzame zilinganisa ukusebenza kwezifundo ekusebenzeni kanzima. Iimbongolo zanikezwa i-alprazolam yezidakamizwa phambi komsebenzi wanikezelwa ukwenzela ukuba kubangele ukulahleka kokufunda (uTom et al.) I-aniracetam eyaziwayo ye-nootropic yahlonywa ngokubhekiselele kwi-IDRA-21 ebomvu eluhlaza ukuvavanya ukuphumelela kokugqibela kokuguqula ukukhubazeka.
Iziphumo zabonisa ukuba i-IDRA-21 powder eluhlaza yayishumi elinamandla elinamandla njenge-aniracetam ngokwemilinganiselo, oko kuthetha ukuba imiphumo yayininzi kakhulu idosi nganye. Imiphumo ye-IDRA-21 powder yahlala isigxina kwiintsuku ezintathu emva komthamo owodwa, ukumakisha njenge-nootropic ehlala ixesha elide kakhulu xa kuthelekiswa ne-2 kwii-3 iiyure zeeyure ezinikezwa ngamanye ama-ampakines.
Ngokufanayo, uphando olwenziwe ngamagundane lubonisa ukuba i-IDRA-21 ye-powder i-powder iluncedo ekutshintsheni ukulahleka kwengqondo-eli xesha elibangelwa yi-drug scopolamine.
Kuzo zombini iimeko, i-IDRA-21 powder eluhlaza yasebenza ngokuphumelelayo ekuphatheni ukuchithwa kwe-AMPA kwi-brain receptors, okwakulinganiswa nokusetyenziswa kweziyobisi ekuqaleni kokuvavanya. Oku kubonisa isithembiso sokuphatha abantu abanokuba nokukhubazeka okufunda ngokumalunga ne-AMPA, okanye ukuphucula ingqiqo kulabo abaneemitholampilo ze-AMPA ezingaqhelekanga.
5. I-IDRA-21 ipowder inzuzo
I-IDRA-21 ipowder inzuzo zezi:
· Iimvavanyo zesikliniki zibonisa ukuba i-nootropic esebenzayo.
· Kulinganiselwa ukuba ku-10 kumaxesha e-30 anamandla kune-aniracetam.
· Umtya omnye ungadlulela iintsuku.
· Unethuba elihle lokuba yi-nootropic eqhelekileyo.
I-IDRA-21 inzuzo eyinqobo yepowder yinto ephuculweyo ekufundeni nasekukhunjweni. Ikhupha kakhulu i-aniracetam kwaye i malunga ne-10-30x enamandla kakhulu ekuguquleni ukulahlekelwa kwengqondo eyenziwe ngu-scopolamine kunye ne-alprazolam. Akunjalo kuphela, kodwa le IDRA-21 powder eluhlaza (CAS 22503-72-6) Iinzuzo zihlala iintsuku ezintathu emva kokuba enye ye-IDRA-21 i powder.
I-IDRA-21 i-benefits ye powder eluhlaza inokukunceda ukuphakamisa imeko ekhululekile ngokufanayo kunye ne-caffeine esebenzayo njengoko inokukunceda ukukhaba ukuqala ngosuku (ikhofu yentsasa) okanye inokukunceda ukuphumula (indebe evuselelayo yeeyi). Zomibini ziqulethe i-caffeine kodwa ngexabiso elithile.
I-IDRA-21 iifowuni eziphambili ze-powder nazo zicatshangelwe ukuba zenze i-long-potential potentiation (LTP). I-LTP kukuphucula ixesha elide kwindlela i-neurons edibanisa ngayo nengqondo. Kubalulekile ekuphuculeni i-syntaptic plasticity, eyomeleza i-synapses ngaphakathi kwengqondo. Njengoko i-synapses ixanduva lokukhumbula, ukuphucula amandla kunye nomsebenzi kubalulekile ekuphuculeni ukuqonda konke.
Impembelelo ye-IDRA-21 yempuphu ebomvu iya kuxhomekeka kakhulu kwibhalansi yakho, ingakanani isetyenzisiweyo (IDRA-21 powder dosage), kunye nemiphumo ozama ukuyifumana. Ngezinye izikhathi i-Nootropics ingasetyenziselwa nezinye izongezo ezibizwa ngokuba yi-'stacking' (i-IDRA-21 i-stacking powder stack) ukwenzela ukuba iphosakele okanye iqhume ukuqhutyelwa kwengqondo.
6. IDRA-21 ipowder life life half
IDRA-21 powder (CAS 22503-72-6) Isiqingatha siphila kwii-48 iiyure.
7. IDRA-21 i powder
I-IDRA-21 i-powder dosage okwangoku kuphela iilingo zezilwanyana eziqhutywe kwi-IDRA-21 impembelelo yepowder. Ukunyuka kwisifundo kunye neenkwenkwezi kubonise ukuba i-3 okanye i-5.6 mg / kg ubunzima bomzimba okwaneleyo ukwenzela ukuvelisa i-IDRA-21 ipowder benefits.
Nangona okwangoku akukho zifundo ezishicilelweyo zeklinikhi ezijolise kwi-IDRA-21 i-powder yoseshi ebomvu yokusetyenziswa komntu, kukho iindawo ezinokubukezwa kwamanye ama-intanethi ezibonisa amava amahle xa i-IDRA-21 ipowusi eluhlaza ithathwa ngomlomo. Isicetyiswa ukukhuthaza umsebenzi wokuqonda i-5-25mg.
Kodwa oku IDRA-21 i powder Izikhokelo kufuneka ziqwalaselwe ngenyameko, ngokukodwa njengoko iziphumo ze-IDRA-21 ezinobumba obuhlaza zingaphelela kwiiyure ze-48. Ukuba i-IDRA-21 i-powder powder ye-5 mg ithathwa, kungekho nto ichaphazelekayo ngoko, nayiphi na enye eyongezelelweyo i-IDRA-21 i-powder doses ethathelwe kufuneka ilumke ngokunikezelwa ukuba kunokubakho ukungahlali kwexesha elingabangela iingxaki.
8. Iimpembelelo ze-IDRA-21
Thatha i-IDRA-21 powder eluhlaza ikhuselekile ngokukodwa, emva kwenkcazo ye-nootropic yeklasi, i-IDRA-21 i powder eluhlaza ayinayo imiphumo emibi ye-IDRA-21. Enyanisweni, ngaphandle kwe-IDRA-21 i-benefits ye powder eluhlaza (ukuvuka, ukwandisa amandla okufunda, njl.) Ayenzi nto enye.
Iingxelo ze-Anecdotal zibandakanya ukuxhalaba kunye neentloko, ezinokuthi zihambelane nokwandiswa kwe-glutamate neurotransmission kulabo sele benomsebenzi onamandla we-AMPA kwaye abayidingi i-IDRA-21 powder eluhlaza.
Nangona kunjalo, kukulungele abantu abasandul 'uhlangothi lokuphepha le nto, njengoko kungenza umonakalo ube mbi ngakumbi ngokolu cwaningo.
9. Thenga i-IDRA-21 powder
I-IDRA-21 powder yikhemikhali enzima kakhulu ukuyifumana. Ekubeni kusekuqaleni kwizifundo zeklinikhi, kusenokuba lixesha lokuba livunywe yi-FDA okanye lifumaneke ngokukhawuleza nje ngokuba 'ukuxhaswa' kweentlobo.
Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba avela kwi-IDRA-21 abaniki beefowuni abaluhlaza, umthengisi ogqithisiweyo we-nootropic (umthengisi we-IDRA-21 powder) www.aasraw.com unikezela ngomgangatho ophezulu we-IDRA-21 powder eluhlaza emhlabeni jikelele.
Abathengi kufuneka baqinisekise ukuba bathenge i-IDRA-21 powder eluhlaza (CAS 22503-72-6) Evela kumthengisi we-nootropic powder (omele i-IDRA-21). Ngenxa yokunyuka kwe-neural slower and length of time it is possible to sell a compound that is diluted or has no value for therapeutic. I-AASraw inkampani ngumthengisi onokuthenjwa we-nootropic powder (umthengisi we-IDRA-21 obisikiweyo wepowder).
Thenga i-Masteron Propionate powder for bodybuilding: i-6 inyaniso kufuneka uyazi !!! Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo?
tags: bathenge i-IDRA-21 powder, IDRA-21 powder, IDRA-21 powder ukuthengiswa, IDRA-21 abaphakeli be powder
Thenga i-S4 (i-Andarine) I-Powder Online | Yonke into ofuna ukuyifumana	I-Sarms AC-262356 Powder: All You Want To Know